Bogga ugu weyn Waa maxay Kharashka Kaadhka Dareenka? Sida Loo Ogaado Oo Looga Waramayo Eedaymaha Been Abuurka ah
Inkasta oo kaadhadhka amaahdu ay yihiin hanti aad u fiican, badanaa waxaa lagu rarraa kharashyo kala duwan oo loo yaqaan kharashyada kaararka deynta. Awoodda aqbalida kaarka deynta waa mid aan gorgortan ka geli karin ganacsigaagu inuu horumaro. Laakiin taasi waxay la macno tahay in aad wax ka qaban doonto kharashka kaadhka deynta.
Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa micnaha khidmadaha kaararka deynta, sida looga fogaado kharashyada xad-dhaafka ah, iyo sidoo kale sida loo ogaado oo loo sheego kharashka kaararka been abuurka ah.
Waa maxay Kaarka Dabiiciga ah?
Waa maxay Kharashka Kaadhka Dareenka?
Sida Looga Fogaado Kharashka Kaadhka Daynta Badan
1. Kharashka sanadlaha ah
3. Kharashka lacag bixinta oo soo daaha
4. Kharashka wax kala iibsiga dibadda
5. Ka badan kharashka Xadka
Sida Loo Arko Oo Loo Soo Sheego Lacagaha Kaarka Daynta Khayaanada
Sida Looga Ilaaliyo Naftaada Khiyaanada Kaarka Daynta
Ma jiraa farqi u dhexeeya kaararka deynta iyo kaadhadhka lacagta?
Kaararka deynta iyo kaadhadhka deynta
Kaarka deynta waa kaar lacag bixin ah oo la siiyo isticmaalaha si uu uga caawiyo in ay bixiyaan baayacmushtarka ama iibiyaha alaabada iyo adeegyada iyadoo ku xiran deynta urursan ee isticmaalaha. Isticmaalaha waxa kale oo loo yaqaanaa kaadh-hayste. Kaarka inta badan waxaa bixiya bangiga ama ururka deymaha kaas oo soo saara xisaab wareeg ah oo siiya khad deyn ah qofka kaarka haysta. Kaarka haysta, beddelkiisa, waxa uu amaahin karaa lacag uu ku bixinayo alaabta iyo adeegyada baayacmushtarka ama iibiyaha iyo deyn caddaan ah.
Dadka kaadhka haystaa waxay ku heshiiyaan inay dib u bixiyaan lacagta la amaahiyay iyadoo la eegayo shuruudaha iyo shuruudaha hay'adda. Kaarka deynta wuxuu noqon karaa kaarka deynta ganacsiga ama kaarka deynta macaamiisha.
Akhri ALSO: Waa maxay Horumarka Lacageed ee Kaadhka Amaahda?
Wax kala iibsi ganacsi kasta oo ku lug leh kaararka deynta, khidmad habayn ayaa loo baahan yahay si macaamilku u dhammaystirmo - khidmadda habbaynta waxaa loo yaqaan khidmadda kaararka deynta. Kharashka kaarka deynta marnaba kama badna 20% iib kasta oo la sameeyo. Ganacsiyadu waxay yareeynayaan kharashkan iyagoo ka dukaamaysanaya agagaarka hawl-wadeennada lacag-bixinta ee kala duwan.
Natiijo ahaan, waxay heli karaan heerar macquul ah oo awood u siinaya inay kaydiyaan xoogaa lacag ah inta uu wakhtigu sii socdo. Laakiin si ay tani u dhacdo iyada oo aan wax arrimo ah, waa inaad aqoon u leedahay mawduuca gacanta, taas oo ah, kaararka deynta. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad dejiso lacag-bixin fiican oo kaadhka deynta ah ee ganacsigaaga.
Akhri ALSO: Waa maxay Farqiga u dhexeeya Kaarka Lacagta iyo Kaarka Amaahda?
Haddii aad seegto wax bixinta kaarka deynta, kharash gareyso wax ka badan xadkaaga, ama aad sameyso tillaabooyin kale oo aan ku jirin iibsiyada caadiga ah, waxaad naftaada ku yeelan kartaa kharashyo badan. Markaad codsato kaarka deynta, shuruudaha iyo shuruudaha qaarkood waa qayb ka mid ah codsiga. Markaad hesho oggolaanshaha, waxaad boostada ku heli doontaa dukumeenti aad u dheer, oo qeexaya heshiiskaaga. Kharashyada laga yaabo in lagugu dalaco isticmaalka kaarka deynta ayaa lagu qeexi doonaa dukumeentiga.
Si daacadnimo leh, marnaba kama baxsan kartid eedeymahan, laakiin waxaad ka fogaan kartaa ilaa heer. Waa kuwan qaar ka mid ah eedaha iyo siyaabaha aad uga fogaan karto:
Kharashyada sannadlaha ah waa kharashyo sannadle ah oo aad ku bixiso isticmaalka kaarka deynta. Waxay badanaa u dhexeeyaan $95 iyo $500. Kaadhadhka intooda badani waxay qaadaan kharash isku mid ah sannad kasta, halka qaarkood laga yaabo inay ka dhaafaan sannadka ugu horreeya. Si kastaba ha ahaatee, si aad isaga ilaaliso kharashka, waxaad dooran kartaa kaadhka lacag-la'aanta ah ee sannadlaha ah. Laakin haddii aad hore u haysatay kaarka khidmadda sannadlaha ah, waxaad u wareejin kartaa mid ka hooseeya ama mid-sannad la'aan doorasho.
Haddii aadan bixin hadhaaga sida loogu baahan yahay sannad-biileedka kasta, kaarka deynta ayaa laga yaabaa inuu soo jiito lacag dulsaar ah. Kharashkan waxa lagu qori karaa heshiiska kaadhkaaga oo ah heerka boqolleyda sanadlaha ah (APR). waxaad mari kartaa biilkaaga ugu dambeeyay si aad u aragto waxa APR lagugu soo dalaci karo sanad kasta. si aad uga fogaato kharashaadka dulsaarka, hubi inaad si buuxda u bixiso biilkaaga sannad kasta. ka sokow, waxaad dhimi kartaa kharashkaaga ama waxaad tixgelin kartaa eber boqolkiiba APR kaarka aan ku dalacin ribo ilaa 21 bilood.
ARAG SIDOO KALE: Sida Loo Isticmaalo Kaarka Amaahda Si Loo Dhiso Amaahda 2022
Haddii aad tahay qof caadaystay bixinta biilka kaadhka deynta oo soo daahay, waxa laga yaabaa in lagugu dalaco inta u dhaxaysa $29 markii ugu horaysay ilaa $40 xadgudubyada ka dhashay ee dhacay lix bilood gudahood. Waxaad furi kartaa kaarka deynta oo aan lahayn ikhtiyaarka lacag bixinta daahitaanka si aad uga fogaato kharashkan. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad bixisaa ugu yaraan lacagta ugu yar marka taariikhda la gaaro.
Kharashkani waxa uu soo baxayaa marka aad wax ka soo iibsanayso meel ka baxsan dalkaaga. Hagaag, kharashku waa qiyaastii 3%. Si kastaba ha ahaatee, lacag ma yara. Si aad isaga ilaaliso kharashyada, tixgeli inaad codsato kaarka deynta oo aan lahayn wax lacag ah oo wax kala beddelasho shisheeye ah.
Haddii aad dhaafto xadka deynta, waxa laga yaabaa in lagugu dallaco. Laakin khidmadu weligeed kama badnaan doonto inta aad ku bixisay xadkaaga. Caadi ahaan, dayn-bixiyuhu wuxuu diidi doonaa wax kala beddelashadaada markaad isku daydo inaad kharash garayso wax ka badan xadka deynta. Si kastaba ha ahaatee, khidmad dhan $35, waxaad heli kartaa ikhtiyaarka wax kala iibsiga si aad u hesho oggolaansho. Laakiin markaa, haddii aad u malaynayso inaan loo baahnayn eedeymaha, waxaad diidi kartaa inaad doorato eedaha xad-dhaafka ah. Intaa waxaa dheer, ka fogaanshaha kharashaadka ilaa xadka deynta ayaa ah habka ugu wanaagsan ee wax loo kala iibsado. Si ka sii wanaagsan, waxaad samayn kartaa alaarmiga markaad ku dhowaato xadka deynta.
Khiyaanada kaarka deynta waa nooc tuugo ah oo ay dambiileyaashu wax ku iibsadaan ama ku helaan hormaro lacageed iyagoo isticmaalaya akoonkaaga kaarka deynta. Waxay tan ku samayn karaan mid ka mid ah akoonnadaada hadda ama inay xadaan kaarka deynta jirka ama faahfaahinta akoonkaaga. Waxaa intaa dheer, dembiilaha wuxuu ku furi karaa xisaabaadka magacaaga adigoon ogeyn.
Intaa waxa dheer, xaaladani kuma cusba bixiyayaasha kaadhka deynta, markaa, waxay isku dayaan intay awoodaan si ay u horumariyaan habab cusub oo ay kaga horjoogsanayaan isticmaalka sharci darrada ah ee kaararka.
Lacagaha kaararka been abuurka ah waxay dhici karaan wakhti kasta waxayna tani noqon kartaa wakhtiga aad filayso. Waxaad u baahan tahay inaad samaysato caado ah hubinta akoonkaaga kaarka deynta si ay awood kuugu siiso inaad si fudud u aqoonsato haddii ay wax khaldan yihiin. Markaad aqoonsato, dabcan, qorshaha xiga ee ficilku waa inaad u sheegto bixiyaha kaadhkaaga. Si loo ogaado falalkan been abuurka ah, waa kan waxa la sameeyo:
Habka ugu fiican ee lagu ogaan karo khayaanada kaadhka deynta waa in si joogto ah dib loogu eego bayaankaaga wax kala iibsi sharci darro ah. Intaa waxaa dheer, waxaad samayn kartaa digniin kaarka deynta kaadh kasta oo boorsadaada ku jira, adoo isticmaalaya app-kaaga mobaylka ama shabakada kaadhka bixisa. Tani, waxaad samaynaysaa adiga oo dooranaya ogeysiis qoraal ah ama iimaylka wax kala iibsigaaga oo qaab ahaan:
Kaarka, ma joogo” wax kala iibsiga, tusaale wax kala iibsiga onlaynka ah.
Macaamil ka sarreeya qaddar la doortay.
Dhammaan wax kala iibsiga
Ogeysiisyada noocaas ah, waxaad si fudud u ogaan kartaa dhaqdhaqaaq kasta oo shaki leh akoonkaaga waxaadna yaraynaysaa khatarta ah in lagu khiyaamo kaadhkaaga deynta.
Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha qaarkood, dhibaatadu waxay noqon kartaa qalad fudud oo ku saabsan kaarka deynta oo aan daruuri ahayn khiyaano. Markaa, marka aad aragto wax kala iibsi sharci darro ah, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato inay tahay khiyaano ama si fudud khalad.
Tusaale ahaan, waxa laga yaabaa in aad isla dukaan ku hesho laba jeer debits. Tani ma aha khiyaamo ee waa khalad uun. Waxaad u baahan doontaa inaad raadiso siyaabo aad ku saxdo arrinta si aad uga fogaato dhacdo mustaqbalka. Waxa aad la qaadan kartaa baayacmushtarka marka hore laakiin haddii aanad garanayn kharashka, waxaad ka baadhsan kartaa magaca baayacmushtarka bayaankaaga kaarka deynta oo aad ogaato halka uu ka ganacsado isagoo wata magac kale. Haddii aad la wadaagto koontada qof kale oo haysta kaar, waxaad waydiin kartaa haddii ay sameeyeen wax macaamil ah.
Si aad uga warbixiso wax kala iibsi sharci darro ah, tillaabada ugu horreysa ee aad u baahan tahay inaad raacdo waa inaad wacdo bixiyaha kaadhka oo aad uga warbixiso khiyaanada. Tan waxaa lagu xalin karaa dhowr daqiiqo gudahood.
Hubi inaad ku qorto wada hadalka qoraal sababtoo ah waxay kaa saari kartaa wax kasta oo masuuliyad ah. U sheeg bixiyaha kaadhka deynta dukumeentigaaga qoraal ah. Waa hab lagu caddeeyo in aad door ka qaadatay ka warbixinta eedaha sharci darrada ah. Wax kasta, waligaa ha ilaawin inaad hayso nuqulka dukumeenti kasta oo boostada loogu diro soo saaraha.
Intaa waxaa dheer, waa inaad u soo dirtaa warqadda si aad u gaarto bixiyaha kaadhka deynta 60 maalmood gudahooda laga bilaabo marka biilasha eedaha been abuurka ah laguugu soo diray boostada. Bedelkeeda, bixiyaha kaadhka deynta ayaa xaqiijin doona inay heleen warqadda. Taasna waa in lagu qoraa 30 maalmood gudahooda marka la helo.
Post laxiriira: 9 Siyaabood oo Fudud oo Loo Isticmaali Kaarka Amaahda
Tirada sii kordheysa ee khidmadaha kaadhka deynta ayaa noqonaaya mid laga naxo maalinba maalinta ka danbeysa. Ma jirto hab la hubo oo aad isaga ilaalin karto dhibbanaha dhicisoobay laakiin waxaad samayn kartaa waxyaabaha soo socda si aad u caawiso xaalada:
1. Si fiican u ilaali boorsadaada ama boorsadaada marka aad dibadda joogto iskuna day inaadan ka tegin kaararka deynta iyadoon la ilaalin.
2. Kaarka deynta kasta oo aadan isticmaalin waa in lagu hayaa meel ammaan ah oo guriga ah. Iska ilaali inaad sidato.
3. Hubi in wax iibsigaaga onlaynka ah lagu sameeyay degel sugan. Si aad u ogaato degel sugan, ka raadi degel leh HTTPS:/ ee bilowga ciwaanka goobta.
4. Kahor intaadan qofna ku siin nambarka kaadhka deynta, hubi inaad xaqiijisatay aqoonsiga qofka iyo inay ka yimaadeen urur la isku halayn karo. Weli waxaa ka sii wanaagsan, hel inaad waydiiso su'aalo sababtoo ah kaadhka bixiyaha ayaa horay u haystay macluumaadkaaga.
Kaararka dallacadu waxay la mid yihiin kaararka deynta waxayna qabtaan waajibaad isku mid ah haddii aad wax iibsato. Waxay leeyihiin astaamo isku mid ah sida abaal-marin iyo faa'iidooyin. Ma laha wax kor u qaadis ah oo dulsaar ah waxaana laga yaabaa inaysan noqon ikhtiyaarka wareejinta dheelitirka.
Farqiga u dhexeeya kaarka deynta iyo kaarka lacag-bixinta ayaa ah awoodda aad daynta u rogi karto hal bil ilaa bil kale. Kaarka kharashka dhaqameed, creditkaagu ma heli karo kordhin. Taas macnaheedu waa, waa inaad bixisa baaqiga buuxa bil kasta. Si kastaba ha ahaatee, kaararka deynta, waxaad bixin kartaa wax iibsigaaga waqti ka dib. Laakin haddii aadan hal mar wada bixin baaqiga oo dhan, waxaad heli doontaa qarash dulsaar ah.
Hoos Ka Akhriso: Waa maxay Farqiga u dhexeeya Kaarka Lacagta iyo Kaarka Amaahda?
Kaararka deynta iyo kaadhadhka lacag-bixintu waxay ku dhow yihiin isku mid inay wadaagaan isla lambarrada kaararka 16-god, taariikhaha dhicitaanka, xargaha birlabka ah, iyo chips EMV. Waxay wax ku iibsadaan dukaamada ama internetka mid aad u fudud oo ku habboon. Si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin hal farqi oo muhiim ah. Halka kaadhadhka debit-ku kuu ogolaanayaan inaad lacag ku kharash garayso adigoo sawiraya lacagaha aad hore ugu shubtay akoonkaaga bangiga, kaadhadhka amaahdu waxay kuu ogolaanayaan inaad lacag ka amaahato bixiyaha kaadhka ilaa xad gaar ah. Labaduba waxay kuugu jiraan si aad alaab u iibsato ama ula baxdo lacag caddaan ah. Weliba waxa ka sii roon, waa in aad boorsadaada ku haysaa hal kaar iyo hal kaadh.
Sideen ku dooran karaa kaarka deynta?
Waxaa jira noocyo kala duwan oo kaararka deynta ah. Sidaa darteed, way adkaan kartaa in la ogaado waxa la dooranayo. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad marka hore tixgelisaa waxa aad uga baahan tahay kaarka deynta.
Immisa ayaan amaahan karaa?
Inta aad ka amaahan karto kaarka deynta inta badan waxay ku xiran tahay xadka deyntaada. Kaarkaaga ayaa go'aamin doona xadka, iyadoo ku xiran arrimo gaar ah oo ay ku jiraan buundada credit-kaaga, inta dakhli ee la heli karo, haddii aad haysato noocyo kale oo kaararka deynta ah, iyo wixii la mid ah.
Miyaa la igu dallici doonaa haddii aan lacag caddaan ah kala baxo kaarka deynta?
Haa, waa lagu oogi doonaa Kharash sanadle ah oo ah 2.5% ama 3% lacagta aad kala baxdo ayaa lagugu soo dalacayaa. Waxa loo yaqaan khidmad hore oo caddaan ah.
Kaarka hore loo bixiyay ma la mid yahay kaarka deynta?
Maya, maaha. kaadhadhka prepaid-ka ah waxay kuu ogolaanayaan inaad ku shubto lacag go'an oo aad ku shubto kaar loo isticmaali karo credit card.
Maxaa dhacaya haddii aanan bixin karin biilasha?
Xaqiiqda ah in kaarka deynta uu lacag amaahiyo, waxaa laga yaabaa inaadan bixin dhammaan baaqiga hal mar. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad dheelitirto kaarkaada, taas oo macnaheedu yahay in lagugu soo dalacayo ribo oo si degdeg ah u soo baxaya.
Kharashka kaadhka deynta ayaa lagu dabaqayaa hadhaagaaga haddii ay dhacdo in aad seegto lacag bixin, la baxdo lacag caddaan ah ama aad wareegto. Isku day inaadan dhaafin xadka deynta markaad wax kala iibsaneyso. Tani waxay wax u dhimi kartaa dhaqaalahaaga mustaqbalka. Waxa ka sii muhiimsan waa awoodaada inaad samayso go'aamo xog ogaal ah. Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani uu kaa caawiyay inaad wax badan ka fahanto kaararka deynta iyo siyaabaha lagu ogaado kaararka been abuurka ah. Waxaan kugu sugeynaa qeybta faallooyinka.
Waa maxay Kharashka Habaynta Kaarka Kiraynta?
Sidee Looga Fogaadaa Khidmadaha Kaadhka Daynta Guud?
Kharashka Kaarka Daynta ee Ganacsatada
Sida Loo Arko oo Looga Muramo Kharashyada Kaadhka Daynta Caadiga ah
Kaararka Daynta - Jawaabaha Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo
Waa maxay Farqiga u dhexeeya Kaarka Daynta iyo Kadhka Debit?
Farqiga udhaxeya Kaarka Daynta iyo Kaarka Dalacsiinta
Waxaa jira waqtiyo ay u egtahay inaysan jirin wax lagu iibsado kaarka hadiyadda, laga yaabee…
Haddii aad rabto in aad u rogto akoonkaaga dillaalnimada khadka tooska ah boorsada khadka tooska ah, kaarka deynta ee Robinhood waa…